ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်မလား? ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်မလား?
ကျွန်နော်တို့ဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒစိတ်ကြောင့်ပဲ​ြဖ​စ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်နဲ့ ဖြစ်နေတက်ကြပါတယ်။
ငါလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား လုပ်လိုက်လို့ ကောင်းပါ့မလားဆိုပြီး ဝေခွဲမရပဲ တုန့်ဆိုင်းနေတက်ကြပါတယ်။
ဒါကလည်း ကိုယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ထဲက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားပြီး တွန့်ဆုတ်နေတက်ကြပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက ကျွန်နော်အမြင်ကို ပြောရလျှင် ကိုယ့်ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင် တစ်မျိုးဆက်ဆံတက်ပြီး ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တော့ဘူး လိုအပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် အနေအထား ဆက်ဆံမှုတစ်မျိုးပြောင်းလဲကာ ဆက်ဆံလာတက်ကြပါတယ်။
ခေတ်စကားအရ ပြောရလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ လိုရင်တစ်မျိုး မလိုရင်တမျိုး ပါ။
ကိုယ့်ကို သူတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ရေလာသောအခါ မြောင်းကအဆင်သင့်ဖော်​ပေး ထားတက်သလို ကိုယ်က ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်ပေးနေတက်ကြပါတယ်။
ဲသူတို့ဘက်က အကောင်းမြင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က ဆိုးတဲ့အရာ လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ရှေ့စကားပုံအရ မမှားသော ရှေ့နေ မသေသောဆေးသမားဆိုသည်အတိုင်း တခါတရံတော့ လူဆိုတာ မှားတက်ပါတယ် အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူးဆိုပြီး ဖြေသိမ့်ပေးတက်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ကို အလိုမရှိတော့ဘူး ကိုယ်က ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးမရှိစေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ကောင်းအောင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆိုးမြင်နေတက်ကြပါတယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်က တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မယ် ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ငါ့အတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်တယ်လို့ တွေးမိလို တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြီးကိုကြည့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငဲ့ကွပ်ပြီး တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ကိုယ်လုပ်စရာ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကို ဖြောင့် ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းသွားရပါလိမ့်မယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုတစိုက် ရှိနေခြင်းက ကိုယ်လျှောက်လှမ်းမယ့်လမ်း ဖြောင့်ဖြူးပြီး လုပ်ကိုင်သမျှ ေအာင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ရေးသားရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ တွေးမိသမျှကို ရေးချတင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်နော်အထက်က ရေးသားခဲ့သမျှထဲ၌ လိုရင်းတိုရှင်း ရေးချထားသောစကားလုံးများကို စာဖတ်သူရဲ့ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ဖြည့်တွေးပေးကြပါခင်ဗျာ။
စာကရှည်နေပြီဆိုတော့ အသေးဆိတ်ကို ထည့်မရေးတော့ဘူး။
ကျွန်နော်က မရေးရင်မရေးဘူး ရေးပြီဆိုရင် စာရှည်ရှည်ရေးလိုက်ရမှ စိတ်ကကျေနပ်တယ်။